ကုလားတန်တံတား (ပလက်ဝ) ပစ္စည်းများအတွက် IKBZ အာမခံလုပ်ငန်းက ငွေကျပ်သိန်း ၄၉ဝဝ ကျော် အစားထိုးပေးလျော် - Yangon Media Group
AA အဖွဲ့၏ ဖျက်ဆီးခံရမှုကြောင့် မီး လောင်ဆုံးရှုံးသွားသည့် သံပေါင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် ငွေကျပ်သိန်း ၄၉၁ဝ ကို IKBZ အာမခံလုပ်ငန်းက ပြန်လည်အစားထိုးပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ် ကုလားတန်တံတား(ပလက်ဝ)စီမံကိန်းအတွက် MV ရတနာဝင်း(၇)ရေယာဉ်ဖြင့် သယ်ဆောင် လာသည့် IKBZ အာမခံလုပ်ငန်း၏ ရေကြောင်းအာမခံအကာအကွယ်ထားရှိသော သံပေါင်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက် မီး လောင်ဆုံးရှုံးခဲ့မှုအား ငွေကျပ်သိန်း ၄၉၁ဝ ကို IKBZ အာမခံလုပ်ငန်းက အစားထိုးပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို ဇွန် ၁၈ ရက် မွန်း လွဲပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ ဆောက် လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပလက်ဝမြို့သည် ကုလားတန်မြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီး ကားလမ်းသို့တိုက်ရိုက်မ ရောက်သည့်အတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်မှုခက်ခဲပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုအလွန်နောက်ကျခဲ့၍ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် ပလက်ဝတံတားကို တည်ဆောက် ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး တံတားကို ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင် တံတား အောက်ထည်လုပ်ငန်းများ ပြီးစီး၍ တံတားအပေါ်ထည်သံပေါင်များ တပ်ဆင်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သော ကြောင့် မတ်လအတွင်း တံတား သံပေါင်များကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ J& M Steel Solutions Co,Ltd မှ ထုတ်ယူကာ တံတားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ ရာ မတ် ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက AA အဖွဲ့၏ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် MV ရတနာဝင်းသင်္ဘောနှင့် သယ်ဆောင်လာသော တံတားသံ ပေါင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မီး လောင်ပျက်စီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဟန်ဇော်တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ရာတွင်” IKBZ ကုမ္ပဏီဟာ ဒီလိုတာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုစိတ်ဓာတ်နဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ရော နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပါ ပျက်စီးသွားတဲ့ သံပေါင်ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ထုတ်လုပ်ဖို့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီလိုအစားထိုးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း ကြောင့် တံတားသံပေါင်တွေကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပြီး အချိန်မီ ပြီးစီးအောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့လည်း ကုလားတန်မြစ်ကူး (ပလက်ဝ)တံတားကြီးကို အရည်အသွေးပြည့်မီစွာနဲ့ အမြန်ဆုံးပြီးစီး အောင်နှင့် ဒေသခံပြည်သူတွေ ဆောလျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်ရှိ သဘာဝ ထုံးကျောက်တောင် ဖားဘောင်ဂူကို ခရီးသွား လုပ်ငန်းဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ
လွှတ်တော်တွင်း တပ်မတော်သား ရာခိုင်နှုန်း ၅ဝ အထိ ပါဝင်ရန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ် အကြံပြု
တာမွေ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင် အရပ်သားအင်အား သုံးစွဲခြင်း မရှိကြောင်း ရဲချုပ် အော??
အဆိုတော် အစ္စဏီအမှုမှ တရားလို မော်ဒယ် ကို တံခါးပိတ်စစ်ဆေး၊ အစ္စဏီက မိမိအား မသနားဘဲ ထောင်ထဲ ထား??